Konke odinga ukukwazi mayelana nomholo oyisisekelo | Ezezimali Zomnotho
Konke odinga ukukwazi mayelana nomholo oyisisekelo
USusana Maria Urbano Mateos | | Umnotho jikelele, Umsebenzi
ESpain, into esebenza ezabasebenzi zimayelana nokulungisa umholo lezo zinkampani okufanele zinikeze abasebenzi bazo. Ukuze izinsiza zabantu, Kuyisibalo okufanele basithathe ngokungathi sína kakhulu ngoba siqukethe ubudlelwano phakathi kokuzuzwa yinkampani nenani elifanele lomsebenzi ngamunye.
Ngaphezu kwalokho, umholo kufanele ube oshukumisayo ukuze abasebenzi bayakhuthazwa ukuthi benze umsebenzi omuhle kanye nokukwazi ukukhiqiza ngokwengeziwe futhi ngokwengeziwe enkampanini.
1 Uyini umholo oyisisekelo futhi yini okufanele sazi ngawo
2 Yimaphi amaphuzu umholo oyisisekelo owenziwe ngawo?
3 Yini okufanele yonke iholo lesisekelo libe nayo
4 Amaphuzu alandelayo angaphandle komholo oyisisekelo
5 Yiziphi ezinye izinto okufanele uzicabangele iholo lesisekelo
Uyini umholo oyisisekelo futhi yini okufanele sazi ngawo
El umholo oyisisekelo wesisebenzi, Kuyisethi yamanani ezomnotho anikezwa isisebenzi. Lokhu kungaba yimali noma akuyona imali. Lokhu kunikezwa abasebenzi ngokuya ngezinsizakalo umsebenzi awunika inkampani.
Zonke izinkampani ezilawulwa ngokuphelele, azikhululekile ukubeka umholo eziwufunayo kubasebenzi bazo, kepha kumele zisekelwe kulokho izinhlangano zomphakathi ezibatshela khona. Ngaphansi kwalo mthetho, okuhlosiwe ukuthi izinkampani azihlukumezi ngokubeka umholo phansi kakhulu abasebenzi babo namahora okumele bawasebenzise angalawulwa.
Kodwa-ke, ochwepheshe bathi lokhu kusho ukuthi izinkampani azikwazi ukukhula ngendlela esheshayo nokuthi zihlala zimile ngenxa yamaholo avame ukukhokha.
Eminye imithetho eyengeziwe ukuthi uma kuzokwenzeka umholo ngomusa, Lokhu akumele kweqe u-30% wenani eliphelele leholo. Uma kwenzeka kuba Abasebenzi basendlini, isibalo sikhula size sifike kuma-45%. Mayelana ne ubuncane bomholo wokusebenza, kusekelwe kuzinkokhelo ze-14, eyodwa ngenyanga futhi ezimbili ezingavamile of 645 euro ezinye izivumelwano ezihlangene.
Inkampani kufanele yazise umuntu nganoma yiluphi ushintsho abafuna ukulwenza emholweni oyisisekelo. Lokhu kumele kwaziswe izinsuku ezi-5 ngaphambi kokwenza ushintsho. Uma kwenzeka inkampani isebenzisa ushintsho kumholo wesisekelo kunoma yimuphi umsebenzi, lokhu kungadala ukuthi inkampani ibikwe ngokukhwabanisa kwesisebenzi futhi ikhokhele izinhlawulo ezinzima.
Yimaphi amaphuzu umholo oyisisekelo owenziwe ngawo?
Umholo wesisekelo. Umholo oyisisekelo yinani lemali elizokhokhelwa isisebenzi isikhathi esithile. Emiholweni eminingi eyisisekelo, bakhokhwa njalo ngenyanga. Lapha, kuzobonakala inani lemali isisebenzi esizoyiqoqa nesikhathi esizothatha ukusiqoqa. Kubalulekile ukuthi ufunde ukufunda le datha, ngoba bazokutshela inani elizokhokhiswa nesikhathi okufanele uyiqoqe futhi uzokwazi ukubona ukuthi ngabe okuthile emholweni wakho oyisisekelo kuyashintsha ngaphandle kwesaziso, ngoba uma kwenzeka lokhu kwenzeka, kufanele ubike enkampanini.
Izengezo zemiholo. Lezi zithasiselo zisuselwa eminikelweni eyenziwa kubasebenzi ngokuya ngomsebenzi owenziwe ngumuntu ngamunye. Abanye abantu banebhonasi emiholweni yabo eyisisekelo yomsebenzi oyingozi, imisebenzi yasebusuku, noma yini enye engenza umsebenzi ube yingozi kumsebenzi.
Le ngxenye yomholo oyisisekelo ibuye ifake zonke izengezo ezenziwe ngumsebenzi ukuthola ibhonasi futhi ezinikeza imiphumela emihle enkampanini. Lokhu kungaba yinoma yiluphi uhlobo lokuthengisa olwenziwe elenzele inkampani imali futhi alungeni ngaphakathi kwemisebenzi ejwayelekile yomuntu osebenzayo.
Amahora angeziwe. Amahora esikhathi esingeziwe angena ngaphansi komholo oyisisekelo futhi yilawo akhokhelwayo nokuthi umsebenzi wenza ngaphandle kwamahora abo okusebenza. Amahora awakwazi ukweqa imikhawulo ejwayelekile. Isonto lokusebenza cishe amahora angama-40 ngesonto. Sonke isikhathi esengeziwe esenziwa ngaphandle kwalesosikhathi, sizokhokhelwa ngentengo ephakeme futhi sizonikezwa isisebenzi ekupheleni kwenyanga ngomholo waso ojwayelekile ngemuva kokusebenza amahora amathathu e-overtime, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi sonke isikhathi esengeziwe sibalwe futhi ungavumeli inkampani ikwenze. Ngale ndlela, singaqinisekisa ukuthi basikhokhela inani elifanele.
Yonke le datha kumele ibhalwe esivumelwaneni esihlangene, ngoba uma kungenjalo inkampani inganqaba ukukhokha isikhathi esengeziwe.
Inkokhelo eyengeziwe. Ngaphakathi kweSpain, umuntu ngamunye ubophezelekile ukuthola izinkokhelo ezi-1 zonyaka inkampani okufanele imnikeze zona ngenyanga. Imvamisa, inkampani ikhokha inani lanyanga zonke elibhekisa kumholo oyisisekelo futhi kuzonikezwa izinkokhelo ezimbili ezingeziwe ezijwayele ukwenzeka ngesikhathi sikaKhisimusi nangesikhathi sehlobo. Imali eyengeziwe ekhisimuzi ayibalwa njengebhonasi, ngoba izinkampani eziningi zinikela ngamabhonasi abo hhayi ngemali, ngaphandle kwaleyo nyanga abafaka ngayo imali eyengeziwe.
Lokhu akunjalo kuzo zonke izinkampani, ngoba ezinye zikhokha izinkokhelo eziyi-12 kuphela, kungafaki izinkokhelo ezengeziwe enanini eliphelele. Kulezi zinkampani, inani lezinkokhelo ezimbili ezingekho lifakiwe kuzinkokhelo zanyanga zonke.
Inkokhelo enikezwa ngezinongo. Imiholo ekhokhelwa inhlawulo inikezwa abasebenzi ngeminikelo engahlobene nemali. Izinkampani eziningi zinikeza abasebenzi bazo amakhaya noma izimoto, kanye nezitembu zokudla noma amakhodi amakhuphoni anikezwa abasebenzi abaphezulu noma esikhundleni seholo labo.
Yini okufanele yonke iholo lesisekelo libe nayo
• Indawo yomholo lapho sizobona khona inani okufanele sikhokhise ngalo, kumele sazi kahle yonke idatha ekule ndawo ukuze sikwazi ukubona ukuthi ngabe kukhona yini idatha eshintshayo ngaphandle kokusazisa.
• Yonke imihlomulo noma yiliphi iklayenti okufanele libe nayo ngokomthetho (okusho ukuthi kumele uyazi ukuze uqinisekise ukuthi iyikho konke)
Imihlomulo umthetho oyinikeza izinkampani ukuze kube yizo ezinikezwa abasebenzi. Lokhu kungaba ngamabhonasi noma olunye uhlobo lokukhuthaza lwabantu abasebenza kanzima kakhulu.
Amaphuzu alandelayo angaphandle komholo oyisisekelo
Onke amathuluzi okusebenza noma iyunifomu umsebenzi anquma ukuyithenga yedwa
Yonke iminikelo eyenziwa yinkampani kwisisebenzi ihlobene nobudala obudala noma ukuguga.
Ukubamba iqhaza kwabasebenzi benkampani ekwabeni inzuzo.
Yiziphi ezinye izinto okufanele uzicabangele iholo lesisekelo
Izinguquko zemiholo eyisisekelo ngokuya ngezinzuzo noma inani lesikhathi esetshenzisiwe. Isibonelo, umuntu ochitha unyaka enkampanini, uzoqala ukukhokhisa imali ethe xaxa futhi uzothola imali ethe xaxa ngamabhonasi noma izinkokhelo ezengeziwe.
Amaholo onawo ukwahluka okungaguquguquki nokuguqukayo (njengemiholo lapho kufakwa khona amakhomishini) ayangezwa ngesikhathi sokubala kokugcina; Kodwa-ke, kunezinkampani lapho amakhomishini afakwa khona ezinyangeni ezimbili.
Inkampani kufanele yazise umuntu nganoma yiluphi ushintsho abafuna ukulwenza emholweni oyisisekelo. Lokhu kumele waziswe izinsuku ezi-5 ngaphambi kokwenza ushintsho. Uma kwenzeka inkampani ifaka izinguquko emholweni oyisisekelo kunoma yimuphi umsebenzi, lokhu kungadala inkampani ingabikwa ngokukhwabanisa kwesisebenzi bese ikhokha izinhlawulo ezinkulu.
Ngaphakathi kwenkontileka, isikhathi esengeziwe kufanele siqale ukubala ngemuva kwamahora angaphezu kwamathathu ngesonto. Kufanele ube nokulawula isikhathi esengeziwe ukuze ukwazi ukubala kabili ngenyanga.
Uma umsebenzi uyagula, inkampani iphoqelekile ukuthi ikhokhele umholo wezinyanga ezimbalwa kuze kube yilapho umuntu eya kwababili. Uma kwenzeka lowo muntu esekhefini ngenxa yengozi esemsebenzini, inkampani kufanele ithwale izindleko zokwelashwa.
Uma kwenzeka umholo oyisisekelo onikezwa yinkampani ungaphansi komholo oyisisekelo onikezwe kuleyo ndawo, a ushintsho lwamaholo ayisisekelo ukuze umuntu akwazi ukuqoqa okufanele ukhokhise ngempela indawo okuyo.
Zonke izinkokhelo zanyanga zonke kumele zinikezwe abasebenzi phakathi izinsuku zokuqala zenyanga; Kodwa-ke, inkampani inomnqamulajuqu kuze kube ngumhla ka-17.
Uma inkampani ingakhokhi abasebenzi ngesikhathi, kungangezelelwa imali eningi noma inhlawulo ezokhokhelwa abasebenzi abangawutholanga umholo wabo ngesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Konke odinga ukukwazi mayelana nomholo oyisisekelo
Ngabe uyazi ngempela ukuthi kuyini ukwanda kwemali enkulu?
Ungayisebenzisa imali ekhokhela ubungozi ezitshalweni zakho?